Pokémon Sun na Ọnwa, gbanwee ihe niile na-agbanweghi ihe ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Pokémon Sun na Ọnwa, gbanwee ihe niile na-agbanweghị ihe ọ bụla
Ka anyị lelee ihe ọhụrụ si na Nintendo na Pokémon, nke bụ ezigbo ya, egwuregwu egwuregwu a na-ebugharị ebugharị, ọ bụghị iyi egwu ahụ nke mere ka anyị na-agagharị n'okporo ámá dị ka zombies nke ọ na-adịghị onye na-echeta ọzọ, gịnị ka a na-akpọ ya? Ee, nke ahụ, Pokémon Go.
Oge erugo ikwu maka Pokémon Sun na Ọnwa, ọ bụrụ n’echiche na ị ga-ewepu ọdịnaya a, ị ga-enwe chi. Ma ọ bụ na ọhụụ Pokémon ewerela ikike dị elu na-atọ ụtọ. E nwere mmadụ ole na ole hụrụ n'anya saga ndị nọ na-eti mkpu maka mmeghari ohuru nke usoro ihe egwu na ihe osise, na Nintendo amaara ka esi ege ntị ma n'otu oge ahụ mee ka ntị chiri ntị na Pokémon Sun na Ọnwa.
N'ihi na inye mgbanwe egwuregwu na-atọ ụtọ, itinye ya n'oge ọhụrụ n'otu oge, na-enweghị emetụta egwuregwu ma ọ bụ otu egwuregwu si amalite, ka anyị kwuo eziokwu, siri ike. Mana Nintendo emeela nke ọma, ugbu a anyị nwere ike ịhụ Pokémon ka anyị hụbeghị ha mbụ, Anyị nwere ike ịsị na ha nwere eserese dị egwu, dịka Pokémon si dị, n'ezie. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ mgbanwe mgbanwe a dị ike, mana idobe isi nke mgbe niile.
Nke ahụ ziri ezi, egwuregwu ahụ na-ejigide otu ụdị ọgụ ahụ, otu akụkọ ahụ, otu mmepe ahụ, nke ahụ bụkwa ihe na-eme Pokémon mgbe nile ka ọ na-atọ ụtọ, na-etinye aka na ọgụ na-adabere na ya, na-enwe ike iche echiche mgbe ị na-alụ ọgụ. Maka nke a, anyị ga-enwerịrị akụkọ ntolite siri ike, Akụkụ ọzọ nke na-adịghị efu n'aka nke mbipụta ọhụrụ a nke egwuregwu Nintendo. Ọbụna ndị anyị hapụrụ Pokémon ọtụtụ afọ gara aga, ọ tụrụ anyị n'anya nke ukwuu banyere otu egwuregwu Nintendo ọhụrụ a si mepụta ebe anyị bu n'obi ijide mmadụ niile. Na nkenke, ọrụ Nintendo na Pokémon Sun na Ọnwa dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Pokémon Sun na Ọnwa, gbanwee ihe niile na-agbanweghị ihe ọ bụla
Qualcomm na-ekwu maka Snapdragon 835 ọhụrụ
Otu Hacker nyochara maka izu ọtụtụ nde dollar na Electronic Arts